Hong Kong waxay xaqiijisaa Dhacdooyin MIIKII UGU HOREEYEY EE MUQDISHO Inta Dhexdeeda COVID-19 Caqabadaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » Hong Kong waxay xaqiijisaa Dhacdooyin MIIKII UGU HOREEYEY EE MUQDISHO Inta Dhexdeeda COVID-19 Caqabadaha
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Hong Kong • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Guddiga Dalxiiska ee Hong Kong (HKTB) waxay ku dhawaaqday in Hong Kong loo doortay magaalada martigalinaysa afar dhacdo oo MICE caalami ah, oo ay ku jiraan dhacdooyinkii ugu horeeyay abid ee magaalada ee qiimaha istiraatiijiyadeed ee sarreeya, iyo laba dhacdo oo soo noqnoqday iyada oo ay jiraan caqabadaha COVID-19. Dhacdooyinkan ganacsi ayaa la filayaa inay keenaan 10,000 oo soo-booqdayaal badan oo wax soo saar wadar ah waxayna ku soo kordhinayaan magaalada wax-ku-ool dhaqaale oo ballaaran isla markaana horseedaya horumarinta qaybaha kala duwan.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan aragno Hong Kong oo ku guuleysaneysa dhacdooyinka muhiimka ah ee MICE ee ka dhanka ah tartamayaasha adduunka," ayuu yiri Dr. YK Pang, Guddoomiyaha HKTB. “Waa wax lagu farxo in la arko munaasabadaha waaweyn ee lagu qabanayo magaaladeenna markii ugu horreysay, sida Ururka Caalamiga ah ee Diyaaradaha Caalamiga ah (IATA) World Cargo Symposium, Shirka Teknolojiyada Isboortiga ee Aasiya iyo Shirweynaha Aasiya ee Beerista Beerista (CAST) 2023. Waxay muujineysaa kalsoonida qabanqaabiyeyaasha dhacdooyinka caalamiga ah ee ku aaddan Hong Kong inay tahay goob istiraatiiji ah, ammaan ah oo nadaafad leh oo loogu talagalay munaasabadaha ganacsiga sare. HKTB waxay sii wadi doontaa inay si firfircoon ula macaamisho qabanqaabiyaasha caalamiga iyo kuwa Hong Kong si ay ugu tartamaan martigalinta xuquuqda munaasabadaha waaweyn ee MICE isla markaana ay kor ugu qaadaan dadaallada soo jiidashada dhacdooyinka soo noqnoqda iyadoo la eegayo in la ilaaliyo maqaamka Hong Kong ee ah Goobta Kulan ee Adduunka. ”
Mid ka mid ah diiradda istiraatiijiyadda MICE ee Guddigu waa sayniska caafimaadka. Ku guuleysiga Shirweynaha Bulshada Aasiya ee Sawirka Wadnaha (ASCI) 2022 waxay siinaysaa dhiirigelinta warshadaha MICE-ka Hong Kong. Dr. Lilian Leong, Aasaasihii Madaxweynaha & Madaxweynihii Hore ee Kulliyadda Hong Kong ee Raadiyaasha, waxay tilmaamtay sumcadda magaalada ee xirfadda la xiriirta iyo taageerada dhan walba ah ee qabanqaabiyaasha MICE waa qodobbada guuleysta ee dalabka. “Jagada Hong Kong ee hogaaminta adduunka ee sayniska caafimaadka, gaar ahaan shucaaca iyo wadnaha, xaqiiqdii waxay ka dhigeysaa mid ka duwan tartankeeda,” ayuu yiri Dr. Lilian Leong. Kulamada iyo Bandhigyada Hong Kong (MEHK) waxay bixisay adeegyo xirfadlayaal ah oo hal-joogsi ah tallaabo kasta oo jidka loo maro tan iyo marxaladda tartanka. Waan ku faraxsanahay taageerada aan helnay. ”
Mudane Phillip King, Aasaasihii iyo Gudoomiyaha shirkada Varcis Group Ltd, wuxuu sharaxay go'aankiisa sababta Hong Kong loogu xushay inay martigaliso shirkii ugu horreeyay ee Teknolojiyada Isboortiga Aasiya gobolka Shiinaha ee Weyn. “Iridda laga galo Mainland China iyo suuqgeeda isboorti ee sii kordhaya, Hong Kong waa meesha ugu habboon ee lagu martigeliyo shirkan tikniyoolajiyadda isboortiga ee ugu horreeya abid oo leh kaabayaal heer sare ah, cadeymo maaliyadeed iyo maalgashi oo xoog leh, ilaalinta IP-ga oo heer sare ah iyo sharciga guud, oo lagu daray hal-abuurnimo heer sare ah & Xarunta Teknolojiyada oo leh nidaam deegaan oo bilow ah. Waxaan si xoogan u aaminsanahay inaan ka soo qeyb geli doono mid ka mid ah tirada ugu badan ee ka soo qeyb galayaasha shirka ka socda gobolka APEC oo ka qeyb galaya munaasabad lagu soo bandhigayo tikniyoolajiyad isboorti oo lagu marti galiyay Aasiya. ”
Awoodda udub-dhexaadka Hong Kong ayaa sidoo kale soo jiidata soo noqoshada dhacdooyinkii hore. Mr. Kenny Lo, Madaxa Fulinta, Vertical Expo Services Company Limited iyo qabanqaabiyaha Aasiya Aasiya iyo Qabuuraha Expo & Shirka 2021 wuxuu codkiisa kalsoonida ka dhiibtay, "Tan iyo markii daabacaaddii ugu horreysay ay timid Hong Kong dib ugu soo laabashada 2009, bandhiggu wuxuu si tartiib tartiib ah ugu soo kordhay carwo caalami ah iyo shirkii noociisa ahaa ee ka dhaca gobolka Aasiya ee Baasifigga. Waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in magaaladu ay saddexdayada soo socota soo daabici doonta xitaa meel ka sii weyn. ”
HKTB waxay diyaarisay taxane ah ololeyaasha soo kabashada loogu talagalay warshadaha MICE waxayna si dhow ula socdaan horumarka aafada ee suuqyada ilaha kala duwan. Ololaha waxaa la bilaabi doonaa markii la gaaro waqtiga saxda ah.
Faahfaahinta dhacdooyinka waa sida soo socota:
Event Tilmaamaha Waxaa la filayaa
Taariikhda la soo jeediyay goobta
Shirka Teknolojiyada Isboortiga Aasiya 2021
- Shirkii ugu horreeyay ee farsamada isboortiga B2B oo lagu qabtay Hong Kong iyo gobolka Shiinaha ee Weyn 1,100 First
HK Sayniska & Teknolojiyada
International Transportation Association (IATA) World Cargo Symposium 2022
Shirka xamuulka hawada ee ugu weyn
Markii ugu horeysay Hong Kong
Shirweynaha Bulshada Aasiya ee Sawirka Wadnaha (ASCI) 2022
- Waxa uu ku soo noqday Hong Kong 11 sano ka dib markii uu Hong Kong qabtay shirweynihii ugu dambeeyay 2011 700 Jun 2022 HKCEC
Shirweynaha Bulshada Aasiya ee Beerista (CAST) 2023
Heshiiska caafimaadka ee ugu weyn uguna dheer Aasiya
Toddobaadka Asia Crypto ee 2021 - Dhacdada ugu weyn ee loo yaqaan 'cryptocurrency' iyo tiknoolajiyada xannibaadda ee Aasiya > 2,000
Mar 2021 Hoteelka Kerry Hong Kong
Aasiya Aaskii iyo Qabuuraha Expo & Shirka 2021, 2023 & 2025 - Ganacsiga ugu badan ee Aasiya 6,400 2021,
Heshiiska caafimaadka ee ugu weyn uguna dheer Aasiya ee ku saabsan tallaalista